China Oscillation Rudzi Kaviri-mota Heavy Humidifier Kugadzira uye Fekitori | Huwei
Oscillation Rudzi Kaviri-mota Heavy Humidifier
Muenzaniso Nha.: HW-20MC08-O
Zita: Oscillation Rudzi Kaviri-mota Heavy Humidifier (kukurumidza kuchinjika)
Saizi: 20 ”
Mota: Yakakwira-mhando tiger mota
Max mhute vhoriyamu: 20L / H
Metal Disc: Simbi isina ngura
humidifier: rinorema mhute
Vhiri rakakura: nyore kufamba
Heavy Humidifier Is inidhiri re：
kunze kwepatio & kuseri kwemashure, imba yekuchengetera & kukanganisa kwegaraji, bhiza rakadzikama & dura kutadza,
zoo, fair & festival misting, cookout & dziva misting, dombo uye jazi konzati mamisheni, yekunze michato & yekugamuchira misting, greenhouse misting, chivaraidzo paki & yakakosha chiitiko kutadza, kuvaka nzvimbo misting
kana chero nzvimbo inoda zororo kubva pakupisa kwezhizha.
Iyo inorema humidifier mota mbiri ine giya rinodzora kudzora kumhanya, pamwe nekuzunguzika kwemusoro nemavhiri pazasi kuti asundidzwe neruoko, ichiwedzera zvakanyanya kushandiswa kweanorema humidifier.
1. Zvinotora nguva yakareba sei kuburitsa mhute?
Pakarepo, kana sisitimu yatanga, mhute yemvura inogona kugadzirwa nekukasira.
2.Zvinoita here kuti ubudise hunyoro hunoshanda?
Ehe, yedu system ine yakazvimirira kutonga kweatomization switch, inogona chaizvo kugadzirisa saizi yeatomization, inokodzera nguva dzakasiyana dzehunyoro hunodiwa.
3. Ndeipi simba rekushandisa uye mvura yekushandisa iyo inotonhora system?
Simba rekuchengetedza, kushandiswa kwesimba pamaawa matanhatu kamwe chete, kushandiswa kwesimba kuri pasi pegumi zvakapetwa pane yekumesa mweya, yakanyanya sevanhu, kunwa kwemvura kunoenderana nehuwandu hweatomization iwe yaunoda munzvimbo dzakasiyana.
4. Iyo system inoda kuchengetedzwa?
Hapana kugadzirisa, kuchenesa nguva dzose kwetangi remvura kunogona.
5. Maitiro ekuisa?
Iyo sisitimu inowanzoiswa yakatenderedza kushandiswa kwechiitiko kuitira kuti nzvimbo dzese dzakavhurika dzinogona kufukidzwa nemhute, kana madziro akaiswa, anofanirwa kuiswa kubva pasi 2.30 metres-3.50 metres.
6. Sisitimu inofanirwa kugadzirwa sei?
Vashandi vedu vehunyanzvi vakagamuchira kudzidziswa kwehunyanzvi munzvimbo dzakasiyana kuti vabatsire dhizaini masisitimu akakodzera zvinodiwa nevashandisi
Vakamira fan fan Kudzora
1) Hodha isati yasimbiswa yekupedzisira .Tinotarisisa zvinhu, ruvara, plugs nhanho nhanho.
2) Isu mutengesi, zvakare semuteveri wekuraira, aigona kutsvaga ese chikamu chekugadzira kubva pakutanga.
3) Tine izwi reQC, zvigadzirwa zvese zvaizoongororwa navo zvisati zvazara.
4) Isu taizoedza nepese patinogona kubatsira vatengi kugadzirisa dambudziko kana zvikaitika.
Kukurumidza kuremerwa, kutumira nekukurumidza, kutaurirana nekukurumidza.
NaT / T, 30% neT / T pamberi pamberi pekugadzira uye 70% chiyero neT / T isati yatumirwa.
Pashure: Kureba kunochinja Centrifugal Mist Fan
Zvadaro: Luxury Yemvura Mist Fani
Imwe-mota Inorema Humidifier HW-20MC08A
Oscillation Rudzi Rwega-mota Heavy Humidifier ...
Kaviri-mota Heavy Humidifier